किन आत्तिदै छन् अर्थशास्त्री ? - Jhilko
किन आत्तिदै छन् अर्थशास्त्री ?
चीनबाट फैलिएको ‘कोभिड–१९’ अर्थात् कोरोना भाइरसले विश्वभर आतंक नै सिर्जना गरको छ । आइतबारसम्मको तथ्याङ्कअनुसार कोरोना भाइरसबाट प्रभावित हुने मुलुकको संख्या एक सय एक पुगेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार यो संख्या बढ्ने क्रम जारी छ । भाइरस संक्रमणबाट आइतबार मर्नेको संख्या सबैभन्दा बढी इरान, त्यसपछि चीन, स्पेन, दक्षिण कोरिया र नेदरल्यान्डमा देखिएको छ । यी मुलुकमा आइतबार ८८ जनाको मृत्यु भएको छ । अहिलेसम्म विश्वभर मर्नेको संख्या तीन हजार छ सय ६० जना पुगेको छ । यो मानवीय क्षतिको पाटो हो । संक्रमणपछि द्रुत गतिमा यो फैलिदै गएको डब्लुएचओले जनाएको छ ।
यो मानवीय तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दैगर्दा विश्व अर्थतन्त्र पनि नराम्रोसँग प्रभावित हुन थालेको तथ्यहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् । विश्वको पर्यटन क्षेत्र व्यवसाय प्रायः ठप्प जस्तै देखिएको छ । आर्थिक उत्पादन गर्ने विश्वका ठूला उद्योगहरु बन्द हुन थालेका छन् । यस्ता घटनाको विश्लेषण गर्दै हालै सार्वजनिक भएको एक तथ्यांकले विश्वको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा शून्य दशमलव एकदेखि शून्य दशमलव चार प्रतिशतसम्म कमी आउने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । एशियाली विकास बैंकले जारी गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार कोरोना भाइरसकै कारण तीन सय ४७ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म नोक्सानी हुने अनुमान गरिएको छ । यस अवधिमा चीनले मात्रै एक सय तीन अर्ब अमेरिकी डलर नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ । जुन चीनको कूल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै शून्य दशमलब आठ प्रतिशत हो । त्यसैगरी बाँकी एशियाली देशले करिब २२ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव दुई प्रतिशत गुमाउनुपर्नेछ । यसको सबैभन्दा ठूलो असर विकासोन्मुख देशलाई पर्ने देखिएको छ ।
विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र भएकाले यसको असर बाँकी विश्वमै पर्ने देखिएको छ । जसका कारण अर्थतन्त्र नै असन्तुलन हुने देखिएको छ । सिंगापुर, कोरिया, जापानसहित युरोपेली मुलुकले पर्यटन उद्योगमा हुने क्षतिले समग्र आर्थिक वृद्धिदर खस्कने र ठूलो संख्यामा रोजगारी गुम्ने आँकलन गरिसकेका छन् । सबैजसो ठूला बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीले आफ्नो उत्पादन र आम्दानी घट्ने अनुमान सार्वजनिक गरेका छन् । कच्चा तेलको मूल्य यो वर्षको उच्च तह ७९ अमेरिकी डलर प्रति ब्यारेलबाट घटेर मार्चको पहिलो हप्ताको अन्त्यमा ४५ डलरमा झरेको छ । मागभन्दा आपूर्ति बढी भएपछि तेलको मूल्य ओरालो लागेको हो । अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पनि कोरोनाले ठूलो असर पार्दै लगेको देखिएको छ । त्यहाँको धितोपत्र बजार दुई साता यता १५ प्रतिशतले खस्किएको छ । यस्तो गिरावटलाई विश्वका अर्थशास्त्रीहरुले अत्यन्त गम्भीर भनेका छन् । कुनै प्राकृतिक विपत्ति जस्तै बाढी, भूकम्प र रोगव्याधीका कारण अर्थतन्त्रमा असर परे पनि क्षणिक हुने अनुभव सुनाउँदै आएको विगतलाई यसले विर्साउने देखिएको छ । यसले यत्ति धेरै भयानक रुप लिइसकेको छ कि यो संकट अल्पकालीन नभइ दीर्घकालीन हुने देखिएकाले अर्थशास्त्रीहरु नै आत्तिनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यता नेपालमा पनि यसको गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । एडीबीकै तथाङ्कलाई विश्वास गर्ने हो भने नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा शून्य दशमलव ०४ र जीडीपीमा ०.१३ प्रतिशतसम्म आर्थिक क्षति हुने देखिएको छ । नेपालमा होटेल र रेष्टुरेन्ट क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित हुने भएको छ । यस क्षेत्रमा जीडीपीको ०.८ प्रतिशतसम्मको क्षति हुनेछ । यसबाहेक व्यापार र सेवा क्षेत्र समेत कोरोनाका कारण प्रभावित हुनेछ । नेपालमा कोरोनाका कारण करीव १५ हजार जनाको रोजगारी प्रभावित हुने आँकलन गरिएको छ । यसमध्ये धेरै रोजगारी होटेल र रेष्टुरेन्टमा गुम्ने देखिएको छ । यसबाहेक व्यापार व्यवसायमा बढी रोजगारी गुम्ने आँकलन गरिएको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ३० प्रतिशत आकार ओगटेको नेपाली विप्रेषण क्षेत्रमा नराम्रो असर पर्ने देखिएको छ । त्यसको असर विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा पर्ने देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋण असुलीमा असर पर्ने र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या पैदा हुने देखिएको छ । यी कारणले गर्दा विश्वका अर्थशास्त्रीसँगै नेपालका आर्थिक क्षेत्रमा काम गर्ने जानकारहरुको लागि आगामी दिन टाउको दःुखाइको विषय हुने देखिएको छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
मोदी एकाइसौं शताब्दीको हिटलरको अवतार बन्न रूचाउँलान ?
शेयरबजार घटेपनि कारोबारे रकमको साथ कायमै
साताको अन्तिम दिन शेयरबजार परिसूचक नेप्से ३.२९ अंकले घटेर ११६६.२१ विन्दुमा अडिएको...
वडाध्यक्ष डिभी परेर अमेरिका गएपछि नेतृत्वविहीन बडा कार्यालय
चुनाव जितेका वडाध्यक्ष अमेरिका गएपछि विगत सात महिनायता वडा कार्यालय नेतृत्वविहीन...
चिनियाँ राष्ट्रपति सीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटन...